Magweta Ari Kumirira "Ngochani" Onetswa muMbare neZanu PF
Vechidiki veZanu PF mumusha weMbare vanonzi neMuvhuro vakakonzeresa mhirizhonga padare redzimhosva reMbare Magistrate Court mushure mekunge vatadzisa kubuda mudare iri kwemagweta maviri ari kumirira varume vaviri vanonzi ingochani.
Magweta maviri aya, VaCharles Kwaramba pamwe naVaObey Shava vekambani yeMbidzo, Muchadehama and Makoni, avo vaimirira vamwe varume vaviri vari kupomerwa mhosva yekuita zvechingochani mumusha wakare weMbare, vanonzi vakavharirwa kwemaawa anodarika maviri nevechidiki ava avo vaida kuvarova, uye kupwanya motokari dzavo.
Magweta aya akanga akumbira mutongi wedare, VaBrighton Pabwe, kuti apiwe nguva yekuongorora nyaya iyi, sezvo vakanga vachiitora kekutanga kubva kune mamwe magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ayo anonzi akatyisidzirwa zvakare nevechidiki ava.
VaKwaramba vanoti vakazokwanisa kuburitswa mudare umu nemamwe mapurisa aive netsiye nyoro, uye vakazokwanisa kumhan’ara nyaya iyi pakamba yemapurisa yeMbare.
Asi sachigaro wevechidiki muZanu PF mudunhu reHarare, VaJim Kunaka, avo vanonzi ndivo vaitungamira vechidiki ava, varamba kuti danho ravakatora rine chekuita nezvematongerwo enyika, kunyange hazvo vachiti vacharamba vachiita izvi kusvika magweta aya asiyana nenyaya iyi sezvo nyaya dzechingochani dzisingabvumidzwi muZimbabwe.